Chii chinonzi izwi kutengeserana? | ECommerce nhau
Chii chinonzi izwi kutengeserana?
Mashoma mazwi anogona kunge asingazivikanwe panguva ino nevashandisi senge uya anonzi ﻿kutengeserana kwezwi﻿. Asi isu tinonyatsoziva zvarinoreva zvechokwadi here? Zvakanaka, kuitira kuti parege kuva nekusahadzika kubva zvino zvichienda mberi, zvichave zvakakodzera kuratidza kuti kutengeserana kwezwi kunoitwa mune chimwe chinhu chakafanana neicho kutengeserana kwezwi. Asi chii chinotonyanya kufadza ndechekuti ipfungwa inosanganisirwa nemidziyo mitsva yehunyanzvi, senge, semuenzaniso, Imba yeGoogle, Amazon Echoo.
Ine chinangwa chakanyatso tsanangurwa uye icho ndechekuti pakupedzisira, nekushandisa izvi zvishandiso, zvigadzirwa zvedu zviri muchimiro chekuonekwa mune izvi digital platforms uye semhedzisiro yezviito izvi, vatengi vanogona kuzvitenga. Mupfungwa iyi, hatigone kukanganwa kuti kune makambani akatsaurirwa kutengesa ayo akavakirwa pamidziyo inoenderana nekuzivikanwa kwenzwi. Chero zvazvingaitika, iri yechokwadi yekushambadzira system inounza zvimwe zvakanaka kune vashandisi.
Mukati meichi chirevo chizere, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kutengeserana kwezwi kunogona kutariswa panguva ino sehurongwa hwakabatana nevatengi vadiki kana vashandisi uye vane hukama hwakawanda kune nyowani midhiya yehunyanzvi hweruzivo. Iko kutenga kunoitiswa zviri pamutemo kuburikidza ne internet kutsvaga, kana kunyangwe nemibvunzo yatinobvunza vabatsiri vezwi. Chiito chinowedzera chinowanzoitika pakati pechikamu chakanaka chevashandisi vatsva.
1 Kutengesa kwezwi: mashandisiro ayo mukutengeserana kwedigital
2 Shanduko mukutenga nzira
3 Mipiro yeiyi izwi system
4 Imwe kukosha: kunatsiridza chinzvimbo cheSEO
5 Zvakanakira ino yekutsvaga system
Kutengesa kwezwi: mashandisiro ayo mukutengeserana kwedigital
Pfungwa iyi yakabatana neiyo nyowani zvigadzirwa zvetekinoroji Iyo inoratidzirwa nekushomeka kwayo uye kunyangwe kumwe kwekutanga kuita kutenga kuburikidza nematanho akagoneswa nekuda kwechinangwa ichi. Kubva pane ino maonero, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mupiro wayo mukuru ndewekuti iwe unogona kubvunza zvaunoda nekuti pakupera kwezuva mhedzisiro ichave iyo yaunotsvaga mukati mematanho akanyatsotsanangurwa. Semuenzaniso, zvinowanzoitika mukutsvaga kweinternet, kana kungoita nemibvunzo yatinobvunza vabatsiri vezwi. Iyi maitiro mukutungamira ayo akafanana chaizvo, kunyangwe ichichengeta misiyano inozivikanwa.
Nepo kune rimwe divi, zvakare zvinodikanwa kuratidza zvakanyanya kunyanya kuti kuburikidza nekugadzirisa kwayo iwe unogona kukumbira kubva kune yekutsanya chikafu menyu kuenda kunochengeterwa chero chekufambisa chinogadzirwa kuburikidza neiyi nzira dzekutaurirana.
Chimwe chinhu chaunofanirwa kufunga nezvacho kubva zvino zvichienda ndechekuti Voice Commerce ndiyo inochinja chikamu chekutsvaga kwezwi. Mushure mezvose, ndeimwe yemhando dzakasiyana. Kusvika pakuti inotarisa zvinangwa zvekutsvaga izvo zvinoreva kutenga uye vari padhuze nekutendeuka kana zvinosanganisira kutendeuka chaiko. Uku mukana wakakura pamusoro pemamwe mafomati ane maitiro akafanana.
Kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa panguva ino kuti vazhinji vevashandisi vanosarudza kushandisa izwi kunyaradza kwerudzi urwu rwekutengesa mashandiro. Pamipiro inotevera yatinotsanangura pazasi:
Kuva unoenderana nezvimwe zviitiko zvinoitika panguva imwe chete.
Zvekurerukirwa mumafomati uye izvo zvinoita kuti iwanikwe kupfuura mamwe masisitimu akasiyana.
Iyo inochengetedza yakawanda nguva mukushanda uye dzimwe nguva kutenga kwakanaka kunoenderana nenguva yatinoisa marongero ekuwana.
Inogona kuve chishandiso chekugadzirisa kutenga kubva kune yakasarudzika nzira kupfuura iyo yashandiswa kusvika zvino.
Shanduko mukutenga nzira
Ehezve, chishandiso ichi chinogona kuve chinoshanda kwazvo mukusimudzira uye kuita kuti mafambiro ekutengeserana abatsire. Nekuti munzvimbo yekutanga zvinofanirwa kuti tifungisise chimiro chemakanzuru edu. Ndichiri kune rimwe divi, zvinogara zvichinakidza kushandisa iyo mazano kubva kunjini dzekutsvaga ivo pachavo. Uye neiyi pfungwa, hapana mubvunzo kuti Google, semuenzaniso, inogona kuve mhinduro yakanakisa kune zvatinoda mune yevatengi yedhijitari chikamu.
Isu tinofanirwa kukoshesawo chokwadi chekuti mukupedzisira tinogona kukanganiswa nesarudzo idzo dzinozoitwa nemajini ekutsvaga. Mupfungwa yekuti dzinogona kufanana nedzedu uye nekudaro dzinoenderana muzvinangwa. Sezvazviri madikanwa kuti isu tizvibvunze isu pachedu kana iri chaizvo inotengeswa nezwi. Huye, mhinduro iri pachena inosimbisa uye hapana mubvunzo kuti chikamu chakanaka chevashandisi vanoshandisa izwi ravo kutenga.
Inofanirwa kutarisirwa kubva zvino zvichienda mberi kuti mune ino kesi, chiitiko chekutenga chakabatanidzwa kune chishandiso chine skrini yaida kutarisisa kwedu kwakazara. Kuve mumwe weakanyanya mutsauko zvine chekuita nemamwe masisitimu ekushambadzira.
Mipiro yeiyi izwi system
Izwi Commerce rinotumirwa panguva ino chaiyo seimwe yeakanyanya kuitika mune zvemagetsi kana zvemadhijitari zvekutengeserana kwemakore mashoma anotevera. Ichi chikonzero chekuteerera kubhenefiti dzinopihwa neiyi yakakosha izwi system senge iyi. Semuenzaniso, zvinotevera zviitiko zvatiri kuzokufumura pazasi:
Anorega iwe utaure ndiyo inokurumidza nzira isu yekutaurirana. Ndokusaka paine mikana yakawanda iyo kushambadzira kwenzwi kunotipa kuti tiwane mabhenefiti akakura mubhizinesi redu.
Iko kusununguka kwekutaura zvakananga kune iyo Smartphone kunoita kuti itore nguva shoma, inogadzikana uye inogona kuitwa chero nguva, pasina kushandisa maoko ako kutsvaga, kutenga kana kukumbira ruzivo. Neimwezve optimization mukuita.
Zvinogona kuva kukurudzira kukurudzira kutenga kuburikidza neiyi nzira yekutaurirana. Kusvika padanho rekuti zviuru nezviuru zvevashandisi vari kutozviita kutenderera pasirese. Zvakare munyika medu sezvaunga fungidzira kubva pano maonero.
Icho chishandiso chine simba icho chinowanikwa kune imwe yeakanakisa ekutsvaga injini pamambure, senge Google panguva ino, iri pamusoro pekusarudza nhau uye kushambadza zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi wega wega. Icho chishandiso chakagadzirwa kuti chigare pamwe neino nyowani nguva yekutengesa kwezwi, kutora kutariswa kwevashandisi nenzira yakasarudzika. Asi zvakare kugadzira nzira nyowani yemaitiro mubato revatengi.
Imwe kukosha: kunatsiridza chinzvimbo cheSEO
Sezvo iwe uchinyatso kuziva uye kusvika parizvino, iyo SEO zano yaive yakanyanya kuitiswa pakutsvaga kunoitwa nevashandisi kuburikidza nekhibhodi yavo, asi parizvino kuitiswa kwekutsvaga kwezwi kuri kwechokwadi. Asi nesisitimu ino iwe unozogona kutsvaga zvimwe zvekuwedzera zvinhu, senge iri nyaya yekutsvaga patinoshandisa izwi ivo vari zvakanyanya organic uye zvakasikwa, kunyanya nekuda kwekukurumidza kwavanoitwa nako.
Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei uchifanira kukwidziridza SEO yekutsvaga kwezwi. Nekuti kana isu tikasazvifunga, kana kutsvaga kwerudzi urwu kuchiitwa, hazvizokurudzirwe kwatiri. Ndokunge, iwe unenge uine mashoma sarudzo kuti uite zvekutenga. Zvirinani mune akanakisa mamiriro mune ako ekuhaya kana mune akakodzera kwazvo madigital mapuratifomu mune imwe neimwe mamiriro uye mamiriro.
Nepo kune rumwe rutivi, isu hatigone kukanganwa kuti nekutsvaga kwezwi, isu tinenge tichiwedzera kwedu kusvika. Kana izvo zvakafanana, iwe uchave nezvakakura zvinopihwa kuti uzadzise zvinangwa zvako zvakanyanya mukushandisa, chero zvingave zviri. Mupfungwa iyi, zano rinoshanda kwazvo rekuzadzisa zvinangwa izvi rakavakirwa pane chimwe chinhu chakakosha sekusimudzira kushambadzira kwezwi kubva muchiito chinotungamirwa nekushandurwa kwechirongwa cheSEO. Chimwe chidimbu chezano icho chisingambofi chakakundikana mune idzi kesi chiri mukugadzirisa kune zvitsva maitiro, zvakare kana zvasvika kune izwi rekutsvaga injini.
Zvakanakira ino yekutsvaga system
Ehezve, hunyanzvi hwetekinoroji hunotibatsira kuti tibudirire, uye nekuda kweizvi isu tinongofanirwa kuvasanganisa mumazano edu uye nekuziva mabudiro kubva kwavari muzviito zvavo. Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakakosha iwe zvaunotungamira.
Izvo zvinokubatsira iwe kuwedzera nzira kuita chero mhando yekutenga yedhijitari, ine mhedzisiro iyo pasina mubvunzo inokushamisa iwe kubva ikozvino zvichienda mberi.
Iyo yekumusoro tsika iyo yausingakwanise kupotsa uye nekuda kweichi chikonzero inogona kukupa iwe neimwe nhungamiro yekuenderana nenyika inogara ichikurudzira yekushandisa.
Zvakare dzimwe nzira dzekutenga dzichava dzakakura nekutora zano iri mukushambadzira kwepamberi uye izvo zvinogona kukutungamira kuti uongorore mikana mitsva mukutenga nemabhizinesi.
Iwe unogona kuchinjika kune akasiyana mamodheru mune dzekutsvaga injini usingatarisi pane yakatarwa imwe, seyakawedzera kukosha. Inogona kutochinja mamodheru ako mukushandisa zvazvino uye kuti iwe unogona kuzviita pasina kuomerwa kukuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Chii chinonzi izwi kutengeserana?
Izano rakanaka here kupa kutumira kwenyika?